Thought of the week | Ngaba umntu unokutyikitya isivumelwano sokuthengisa umhlaba esebenzisa isichwethezi (digital computer)? - STBB
Home > Thought Of The Week > Thought of the week | Ngaba umntu unokutyikitya isivumelwano sokuthengisa umhlaba esebenzisa isichwethezi (digital computer)?
Thought Of The Week|1st Apr 2020
Thought of the week | Ngaba umntu unokutyikitya isivumelwano sokuthengisa umhlaba esebenzisa isichwethezi (digital computer)?
Kulamaxesha ibizwa njenge “xesha lezichwethezi” kunye namanyathelo angokuhlala abantu enza ukuba kusayinwe izivumelwano phambi kwawo omabini la maqela, abantu abaninzi babuza ukuba isivumelwano sokuthengisa somhlaba singatyikitywa na, ngamanye amagama, esebenzisa isichwethezi sombane (digital / computer).
Impendulo ithi hayi kodwa khawuqaphele lemiba ingezantsi apha:
Iqumrhu lonxibelelwano ngokusebenzisa ucingo lomnxeba nonxibelelwano ngentambo zombane kunye nezinto ezenziweyo.
i) iUmzekelo ungangena kwisivumelwano esisebenzayo nesibophelelayo sokuthengisa isichwethezwana sombane (laptop) sakho okanye ungenise kwisivumelwano sokuqeshisa ngocingoncwadi: imbalelwano ibonisa ngokucacileyo imiba yesivumelwano; kukho injongo yokuza kwilungiselelo lokubopha; kwaye neegcingoncwadi ezichaphazelekayo ngokucacileyo zezazo kwaye zithunyelwe ngamaqela achaphazelekayo.
ii) Xa kunokubakho ummiselo endaweni ofuna utyikityo phambi kokuba uxwebhu luqwalaselwe ngokusemthethweni, kodwa lo mmiselo awucacisi ukuba utyikityo kufuneka lubhalwe phantsi, iqurhu leECTA liyalela ukuba kusetyenziswe utyikityo oluthe gabalala. (Iqumrhu lweAES lutyikityo olukhethekileyo ‘olwenziwe ngombane’ – ngamanye amaxesha elinokuthatha indawo yomfanekiso ovavanyiweyo wotyikityo olubhalwe ngesandla, okanye utyikityo olichwetheziweyo, kwiimeko ezithile, unokubuyisela endaweni ipeni yesiba kunye nencindi yalo yokutyikitya amaxwebhu. Ukuze usebenzise utyikityo olunjalo kuxwebhu, umntu kufuneka kuqala abe ne-AES eyinikwe ligunya lokugunyaziswa eMzantsi Afrika.)
Ngokwe-Copyright Act, loo mthetho ufuna ukuba ubhalwe phantsi). Ezinye izivumelwano nangona kunjalo azifakwanga kwezi zinto zingasentla, okubaluleke kakhulu, izivumelwano ezigqitywe ngokwemigqaliselo yoMthetho wokuLawulwa koMhlaba.
Oku akubeki ecaleni ukutyikitywa kwesivumelwano sentengiso kunye nokusetyenziswa kocingoncwadi. Umzekelo, ukuba umthengi uza kwenza isithembiso sokuthenga umzi womthengisi, Umthengisi unokuza noncwadi elibonisa isithembiso sokuthenga ndlu leyo yomthengisi alinike umthengi ukuba alityikitye aze esakugqiba alithumele kwakumthengisi ndlu lowo esebenzisa ucingoncwadi. Ukuba umthengi uyavumelelana nemiqathango ebekwe ngumthengisi angathatha isivumelwano asinikwe ngumthengisi asityikitye akugqiba asithumele kumthengisi njengesigqibo esisemthethweni sabobobabini.